Tsara ve ny bisikileta Peugeot? - Hevitra
Tena > Hevitra > Famerenana bisikileta Peugeot - Boky Torolàlana feno
Famerenana bisikileta Peugeot - Boky Torolàlana feno
Tsara ve ny bisikileta Peugeot?
Peugeotsdia tenabisikileta mahafinaritraamin'ny fotoanany, fa noho izy vy sy 'mihantitra', alao antoka fa tsara ny firafitra (toy ny amin'ny harafesina anatiny kely na tsia). Ny harafesina ivelany dia azo diovina mora foana, raha mbola etỳ ambonin'ny tany io ary tsy nampalemy ny fantsona.
Inona no mendrika ny bisikileta Peugeot?
Satria i Etazonia dia alehibefirenena, nybisikiletatsena any dia afaka miovaova isan-karazany aryvidin'nytariho ity; mendrikaPeugeotafaka amidy amin'ny $ 75 ao amin'ny firenena fa afaka mandeha mora amin'ny $ 250 $ 350 any Boston na San Fransisco.
Inona avy ireo marika bisikileta 10 ambony?
nyTop 10Tsara indrindraMarika amin'ny bisikiletaeto amin'izao tontolo izao
Ny vanim-potoanan'ny hazakazaka 2016 dia fahatsiarovana lavitra fotsiny, fa ankehitriny kosa nanam-potoana hieritreretana ny amin'ny 2016 tsy mampino amin'ny World Tour. Fandresena tsy nampino an'i Matt Hayman tao Paris-Roubaix. Steven Kruijswijk dia niha-akaiky dia akaiky tokoa, manakaiky ny fandresena amin'ny Giro d'Italia, ary Peter Sagan dia nanao fampisehoana mahatalanjona tamin'ny naha tompon-daka eran-tany azy.
Nefa na dia fantatray aza fa tena manan-danja tokoa ireo mpitaingin-tsoavaly, dia tena te hahafantatra izay bisikileta nitondra azy ireo tany izahay. Toa an'i Matt Hayman dia tsy nahazo an'i Paris-Roubaix ihany, fa koa tamin'ny moto aero. Ie.
Ka dia nivezivezy tamin'ny angon-drakitra iray taonina izahay ary vonona izahay hitondra anao ny lisitra farany amin'ny bisikileta folo sangany nahomby indrindra tamin'ny taona 2016. Fa ahoana marina no nanaovanay an'izany, reko ianao manontany anao? Matetika izahay nampiasa matematika. Ary adala amin'ny matematika izahay, noho izany dia nangataka ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny matematika antsoina hoe Daffyd Thomas izahay ary niara-namolavola ny World Tour of Bikes.
Ny hazakazaka rehetra eran'izao tontolo izao sy ny dingana tsirairay dia niditra latabatra ary isa no nomena. Na izany aza, miahiahy izahay fa maro aminareo, toa anay, no tsy voatery manaiky ny fanomezana isa amin'ny UCI World Tour. Ho faly ianao maheno fa nanoratra azy indray izahay.
Marina izany. Ny hazakazaka toa an'i Paris-Roubaix sy ny Tour of Flanders, hazakazaka iray andro malaza dia nahazo isa GCN betsaka kokoa noho ny isa UCI. Ny totalin'ny Tour de France dia isa 100 GCN, Paris-Roubaix dia 80 isa GCN ankehitriny.
Saingy ny fandresena an-tsehatra amin'ny Tour de France dia mitondra isa marobe kokoa. Ka izao dia tsy maintsy mandresy dingana dimy fotsiny ianao raha te hanana isa mitovy amin'ny Tour de France amin'ny ankapobeny. - Mampiaiky volana, ary mbola tsy nahavita teo akory izahay.
Manana kajy sarotra be ihany koa izahay, midika izany fa amin'ny maha mpanamboatra bisikileta izay ekipa ekipa World Tour iray monja, dia hahazo isa betsaka kokoa noho ny mpamokatra mpanohana ekipa telo ianao. Satria rehefa manohana ekipa World Tour telo ianao dia mora kokoa ny fandresen'ny World Tour. Iray ihany ny fanitsiana kely, ny fahasamihafana teboka farany ambony dia dimy isaky ny hazakazaka, fa mbola zava-dehibe Dan.
Heveriko fa tonga ny fotoana- Efa izao.- ho an'ny bisikileta hazakazaka fahafolo nahomby indrindra tamin'ny 2016.
Izy io dia- Ny Lapierre Xelius SL misy isa 102 GCN.
Nisy ny fandresena an-tsehatra tao amin'ny Criterium du Dauphine sy ny Vuelta a Espana, saingy mazava ho azy fa ny fandresena lehibe dia ny fandresen'i Arnaud Demare tany Milan-San Remo tamin'ny volana martsa. Amin'ny ankapobeny, midika izany fa nahazo isa ampy ianao mba hampidirana anao mora foana amin'ny TopTen. Ny hitantsika fa mahaliana dia ny nandehanan'i Demare modely io, izay ilay kinova maivana ho an'ny Lapierre, mifanohitra amin'ny Aircode izay maodely haingana kokoa an'ny Sprinter amin'ny taratasy. - Eo amin'ny laharana fahasivy dia ny Ridley Helium SL misy isa 114 GCN.
Tamin'ny taon-dasa ny Helium SL dia naka ny laharana faha-10 ao amin'ny lisitr'ireo bisikileta nahomby indrindra, ka tamin'ity taona ity dia tafakatra toerana iray izany. Nandresy tamin'ny Tour of Poland izy tamin'ny ankapobeny, dingana tao amin'ny Grand Tours anisan'izany i Thomas De Gendt ao Mont Ventoux, na dia mety hadinon'ny olona aza ny fiheverana izay zavatra hafa nitranga tao Mont Ventoux tamin'io andro io. Mampalahelo fa ity no fotoana farany hahitantsika an'i Helium SL amin'ny World Tour, fa aza matahotra mandritra ny fotoana ela satria i Ridley dia namorona Helium vaovao, maivana kokoa ary hiseho amin'ny taona 2017.- Angamba SSL.- Eo amin'ny toerana valo, miaraka amin'ny isa 136 GCN, dia ny Scott Addict, bisikileta volom-borona iray hafa izay mila fanavaozana tsy ho ela rehefa natomboka tamin'ny fahavaratry ny 2013.
Saingy tsy mahagaga raha tafiditra tao anatin'ny folo voalohany izy, raha jerena ny zava-bitan'ny Esteban Chaves sasany, izay nahazo fandresena marobe tamin'ity taona ity ary iza no mahalala izay mety hitranga raha mitazona ilay akanjo mavokely izy amin'ny faran'ny Giro d'Italia - Eny - Ny isa fito dia ny Cervelo S5 misy isa 150GCN. Ankehitriny ity bisikileta ity dia nanana andiana valiny mahavariana tamin'ity taona ity. Mark Cavendish dia nitaingina dingana efatra tao amin'ny Tour de France, nahazo fandresena iray i Stephen Cummings, ary zavatra iray hafa miresaka momba ity bisikileta ity dia ny nanjanonan'ny Cervelos ireo mpitaingina tamin'ny hazavana mahery vaika R5 tamin'ny hazakazaka rehetra afa-tsy i Paris- Roubaix ka iray ihany Safidy, ny aerodynamika S5.
Midika izany fa ny fandresena 10 rehetra tamin'ity vanim-potoana ity dia tamin'ity bisikileta ity. Holazaiko aminao zavatra iray, Dan, farafaharatsiny nilazako fa nanao tsara kokoa tamin'ny bisikileta World Tour GCN ity bisikileta ity noho ny ekipa tamin'ny UCI World Tour. Heveriko fa mampiseho izany fa mety kokoa ny antsika. - Azo antoka. - Eo amin'ny laharana fahenina, misy isa 171 GCN, dia ny Venge Vias manokana.
Ka ny bisikileta aero faharoa amin'ny folo voalohany, aorian'ny Cervelo S5. Ity dia môtô tena mandeha manokana izay midika fa tsy ampiasaina tahaka ny ankamaroan'ny bisikileta hafa amin'ny World Tour. Saingy mbola nahitana taona nahomby tokoa, anisan'izany ny dingana marobe amin'ny Grand Tour tarihin'ny tian'i Peter Sagan sy Marcel Kittel.
Heveriko fa ara-drariny ny milaza fa noraisin'ny mpomba miadana tsimoramora io rehefa navoaka, saingy sarotra izao ny manakana azy ireo - isa dimy, ny ekipa BMC Team MachineMC SLR01 misy isa 198. Ankehitriny, miaraka amina ekipa iray monja amin'ny World Tour, dia zava-bita tsara ao amin'ny BMC. Indrindra rehefa heverinao fa ny iray amin'ireo mpamily azy ireo indrindra, Richie Porte, dia vao avy nahazo hazakazaka World Tour iray tamin'ity taona ity.
Ny ambiny dia miankina amin'ny zava-bitan'ny Greg Van Avermaet iray manontolo amin'ny Tirreno-Adriatico, Montreal GP ary mazava ho azy fa fandresena an-tsehatra tao amin'ny Tour de France - taona iray mafy orina sy tsy miova ho azy ireo izany - eo akaikin'ny lampihazo, ao amin'ny toerana fahefatra, ny Canyon Ultimate CF SLX misy isa 366 dia fitsambikinana goavambe 168 noho ny Machine Team BMC. Mazava ho azy fa ity bisikileta ity dia nahazo Grand Tour tamin'ny endrika Vuelta ary koa ny dingana Grand Tour tamin'ity taona ity, ary tsy misy isalasalana fa taona tsara nanohana an'i Mobistar sy i Katusha ity. Ary ny mahavariana, raha miroboka lalindalina kokoa amin'ny valiny isika dia hitantsika fa nahazo ambaratonga an-tendrombohitra bebe kokoa izy tamin'ity taona ity noho ny bisikileta hafa.
Marina izany, raha maka ny dingana sarotra indrindra amin'ny 2016 ianao dia hahita ny CanyonUltimate CF SLX ho Climbing Bike an'ny taona - statistika tsara izany, sa tsy izany? - misaotra, vady - aza hazavao ny zava-bitanao, fa statistika tsara. - Amin'ny laharana fahatelo sy fahefatra amin'ny lisitra tamin'ny taon-dasa, ampahany noho ny fahazoana ny iray amin'ireo loka lehibe indrindra amin'ny bisikileta matihanina, Paris-Roubaix, mazava ho azy fa ny Scott Folie. Ankehitriny koa dia miady amin'ny vidin'ny bisikileta marobe indrindra izy rehefa avy notapahin'i Mat Hayman teo amin'ny arofam-bato.
Saingy nilalao ihany koa izy toa an'ireo Caleb Ewan sy Oliver Naesen avy any Orica sy IAM Cycling, hatrany Dan, teny an-dalana, manao azy ho bisikileta mahomby indrindra amin'ny hazakazaka iray andro.- Oh, zava-misy marina.- Eny, vady, marina miverina miaraka amin'ny zava-misy .- Ny laharana faharoa, toerana faharoa ary toerana iray hatramin'ny 2015 dia ny Pinarello Dogma F8.
Hatraiza izany? Tsy dia betsaka, marina. Raha mijery ny valiny ianao dia ho hitanao fa io no bisikileta tsara indrindra tamin'ny taona 2016, raha nisy isa 1 fotsiny - zava-misy marina - Ary izany dia tsy noho i Chris Froome nitaingina azy fotsiny dia hadino izany Aza mieritreritra ianao Geraint Thomas dia nandresy ny Pyrenees tamin'ny ankapobeny tamin'ity taona ity. Ary tena tsara tamin'ny hazakazaka iray andro ihany koa.
Wout Poels sy Michal Kwiatkowski dia samy nahazo fandresena lehibe tokoa. Toy ny Foil talohan'io, bisikileta aero tena marobe ity. Amin'ny laharana voalohany, ny bisikileta tena mahomby indrindra tamin'ny 2016 dia ny Tarmac manokana.
Marina izany, tamin'ny taona faharoa nihazakazahana, ny bisikileta maivana avy any Big S dia manjaka ny lisitray miaraka amina isa 661 GCN mahafinaritra. Enina heny mihoatra ny enina heny noho ny bisikileta faha-10 be mpividy indrindra. Mety tsy dia hahagaga loatra izany rehefa mieritreritra ianao fa ny olona toa an'i Peter Sagan, Alberto Contador ary Vincenzo Nibali dia samy mampiasa ity bisikileta ity ary, raha atambatra, dia mahavariana tokoa ny Palmares-ny.
Na dia tsy aerodynamika na bisikileta maivana indrindra aza izy io, na dia miaraka amina singa World Tour-grade aza dia akaiky azy io, na tsia eto ambany, ny fetran'ny lanjan'izao tontolo izao, mangataka ny fanontaniana, Dan, angamba ny aerodynamika sy ny lanja maivana fotsiny dia tsy izany. Mandresy ny hazakazaka bisikileta - Oh, ny teniko. Fanontaniana inona izany.- Eny.- Eny, tsy hieritreritra an'izany ela isika, satria manana fanontaniana iray mirehitra iray hafa tokony horesahina.
Marika sasany, heveriko fa ny BMC sy Pinarello dia tsy manana modely tokana ho an'ny mpitaingina azy ireo azon'izy ireo ampiasaina amin'ny faritra rehetra mandritra ny vanim-potoana, izay midika fa ny fandresena rehetra dia hifantoka amin'ilay maodely iray manokana. Raha marika hafa, toy ny Specialised sy Giant, no manolotra ny mpitaingina azy ireo modely telo hisafidianana karazana terrain, ny fandreseny dia somary nihanaka kokoa. Ary izany dia mametraka ny fanontaniana hoe iza no mpanamboatra bisikileta nahomby indrindra tamin'ny 2016? Izahay koa manana ny vokany.
Amin'ny toerana fahadimy dia ny BMC - ny toerana fahefatra dia mankany Canyon - ny toerana fahatelo dia any Pinarello - ny toerana faharoa dia Scott - ary tsy nahagaga, tamin'ny voalohany satria manana ny Venge Vias amin'ny isa fahenina izy ireo ary manana ny asfalta amin'ny laharana voalohany, izany Mazava ho azy fa manokana. - Andao handeha. Manana statistika sy angona be dia be kokoa izahay hampisehoana aminao fa nieritreritra izahay fa raha manontany momba izany ianao amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany, dia hiditra lalina kokoa amin'ny zavatra amin'ny lahatsoratra mivantana izahay.
Ary angamba mahazo endrika avy amin'ilay genius matematika ao an-toerana aza isika tsara, ampiasaiko malalaka ilay teny hoe 'genius'.
Mety ho toa mahira-tsaina fotsiny izany amin'ny fiheverana fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny tonta-bisikileta taloha izy fa fantatrao - heveriko fa mila ampidirintsika izy hanazava, raha milaza ny marina tanteraka aho - Eny, ny algorithm tsy sarotra dia mety tsy ny voantsinapy ny sasany aminareo - tsia. Tianay ny maheno ny eritreritrao momba izany koa. Mifanaraka amin'ny folo voalohany aminay ve ianao? Inona no bisikileta tianao indrindra tamin'ny 2016, na dia tsy iray tamin'ireo fahombiazana indrindra aza izany.
Avelao amin'ny hevitra etsy ambany ny eritreritrao - Eny. Hamarino tsara ihany koa ny hisoratra anarana amin'ny GCN, raha toa ianao ka eo amin'ny toerana mety indrindra amin'ny vanim-potoana 2017, izay tena horesahinay amin'ny fomba rehetra atsy ho atsy - eny. Manana lahatsoratra vitsivitsy hafa izahay aorian'ny anaovanao izany.
Voalohany misy fitsangatsanganana manodidina ny bisikileta pro an'i Chris Froome, Pinarello - eny. Na ny Tarmac manam-pahaizana an'i Vincenzo Nibali, izay azo antoka fa iray amin'ireo tsara tarehy sy mahomby indrindra - eny. Hitanao eto ambany izy - Eny.
Misy vidiny ve ny bisikileta taloha?
Aza mihevitra ny volom-boalobokabisikiletadiamanan-danjaharena iray, satria ny tsara indrindra ihanybisikiletamahazoa vidiny lafo, hoy i Langley. Vintage indrindrabisikiletaamidio eo anelanelan'ny $ 100 sy 400 $. Na dia ny fahagola miavaka amin'ny tranom-bakoka, toa ny highwheelbisikileta, mazàna tsy manova tanana mihoatra ny $ 3,000 ka hatramin'ny $ 4000.
Rehefa mividy bisikileta, ny mividy bisikileta efa taloha dia fomba iray lehibe ahafahana manangona vola ary manampy amin'ny teti-bolanao. Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia hanome torolàlana anao momba ny zavatra hotadiavina ianao mba tsy hahazoanao clunk ary hahazoana antoka fa mahazo fifanarahana tsara ianao, ary raha manana namana vao manomboka ianao ary te-hividy bisikileta, avy eo diniho ny fizarana an'ity lahatsoratra ity amin'ny lohahevitra. Manantena aho fa tena ilaina ny fampahalalana ao.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny miantso ny Sherlock Holmes anaty anao ary hikaroka fika toy ny mpitsongo rehefa mividy bisikileta. Mametraha fanontaniana, manontania hoe maninona ny tompona ankehitriny no mivarotra azy, mpitaingina bisikileta ve izy? Anontanio izy hoe taiza no nitaingenany ny bisikileta, mety ho tena ilaina ny manangana fifandraisana amin'ny mpivarotra koa. Raha miharihary fa tsy bisikileta mazoto ianao nefa mivarotra bisikileta lafo vidy dia tokony hametraka fanontaniana bebe kokoa izany.
manitsy derailleur aoriana
Tsarovy fotsiny, raha toa ka toa marina loatra ny fifanarahana iray dia mety. (Maneno ny feon'ny fampandrenesana) Wow! Tsy hino an'izany mihitsy ianao, hita fa nandova Pinarello Dogma F12 vaovao tamin'ny andriana Nizeriana aho! Manoro hevitra mafy izahay ny tsy hividianana bisikileta mihitsy raha tsy mahita azy manokana. Indraindray ny olona mividy bisikileta amin'ny fikasana hanomboka bisikileta, ary na inona na inona antony dia tsy manao izany izy ireo.
Vokatr'izany dia tsy dia nitaingina bisikileta firy ary nanapa-kevitra ny hivarotra azy ireo ny farany. Ny fomba tsara holazaina izao dia ny frein - raha tsy vita be ny pad na rims, ary tsy be ny loto ao anaty lavaka sy ny vava ary ny crannies amin'ny caliper, dia angamba tsy dia nampiasaina firy izy io. Ary famantarana iray hafa tsara ny kasety fitanana.
Raha tsy misy kilema sy tany am-boalohany, dia mety tsy nahita hetsika firy ilay bisikileta. Amin'ity fotoana ity dia miteny aho fa amin'ity lahatsoratra ity dia tsy milaza aminao ny fomba hamaritana ny habe marina ilaina ilainao satria mety hahatonga ity lahatsoratra manokana ity ho lava loatra. Aza matahotra anefa, manana lahatsoratra manoro hevitra anao ny fomba hanaovana izany izahay, izay ampifandraisinay amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Ny fanitsiana ny tsatokazo seza hifanaraka amin'ny habenyo dia hevitra tsara, fa io koa dia ahafahanao mijery an-tsokosoko zavatra roa hafa momba ny kodiarana alloy, dia ny hazo seza mety hipoka. Ho hitanao izao raha tafahitsoka izy ireo raha tsy azonao apetraka izy ireo. Afaka mivoaka izy ireo, saingy indraindray dia mety hanaintaina ihany ny mahafantatra fa faritra misy fihenjanana io.
Raha henjana loatra ny visy amin'ny paingotra seza fipetrahana dia mety hiteraka vaky sy vaky ny sezan'ny seza izany. Raha manamboatra azy ianao dia mamoaka azy dia ho hitanao raha tsy maninona. Ataovy ny enti-modinao, zahao izay azonao ary ezaho fantarina hoe inona ilay izy tany am-boalohany tamin'ny bisikileta.
Ho an'ny bisikileta vita tao anatin'izay dimy taona lasa izay dia mora be ny manao amin'ny Internet. Tsy ilaina mafy izany, fa afaka manampy anao betsaka amin'ny ain'ny bisikiletanao izany raha mampandeha ny maody Sherlock Holmes ianao. Izy io koa dia hanampy anao hamantatra ny sandan'ny bisikileta, oh.
B. na nohavaozina ny ampahany. Ohatra, raha mbola manana ny kodiarana tany am-boalohany izy ary taona vitsivitsy dia mety tsy voatarika be mihitsy.
Ny kodiarana matetika no ovaina ary ny bisikileta matetika dia miaraka amin'ny kodiarana mora vidy hafa noho ilay iray narahiny tany am-boalohany, avy eo mety hitranga satria ilay iray tany am-boalohany dia niaritra fatiantoka tanteraka tamin'ny lozam-pifamoivoizana, karazana saina mena mety ho avy. Ka io dia somary mitovy amin'ny vatan'ny vatana tsy mifanaraka amin'ny fiara, zavatra tokony ho fantatra, na izany aza, raha samy hafa ny kodiarana sy ny lasely, dia ireo no ampahany mahazatra amin'ny bisikileta tokony havaozina ary noho izany dia mety ho tsara kokoa noho ireo miaraka amin'ny Ilay bisikileta nalefa tany am-boalohany dia nisy fahasimban'ny kosmetika tamin'ny endriny, saingy manome hevitra ny hoe impiry no nitaingina ilay bisikileta. Ho fanampin'izay, ny tompon'andraikitra mailo dia mazàna mametraka pads sy patches amin'ny frame mba hisorohana an'io karazana fahasimbana io.
Raha ny momba ny tariby manokana, ny fitsipika ankapobe dia ny manova azy ireo matetika ny bisikilety mitaingina azy isaky ny taona vitsivitsy. Noho izany dia ilaina ny manamarina amin'ny mpivarotra rehefa novaina na nosoloina farany ny tariby mba hanananao hevitra hoe rahoviana ianao no mila manao an'io amin'ny ho avy. Rehefa vaky ianao dia rovitra ny pad freins, ary torak'izany koa ny sisin'ny frein amin'ny kodiarana.
Matetika izy ireo no maharitra mandrakizay ary maharitra kokoa amin'ny fanadiovana tsy tapaka, saingy reraka rehefa mandeha ny fotoana. Ary ny zavatra ataonao dia tsy tadiaviko ny molotra mifanongoa, ity ny metaly eo amin'ny sisiny ankehitriny, na ny fitaovana nanidina lavitra dia lavitra ka lasa mivadika izao. Azonao atao ny mamantatra azy amin'ny fijerena azy ary amin'ny fahatsapana azy amin'ny rantsan-tananao.
Raha concave izy ireo dia raiso an-tsaina izany satria midika izany fa mila mividy kodiarana vaovao ianao ary handany vola. Toy izany koa ny frein disc, fa ny mahasamihafa azy dia ny fihodinan'ny frein disc ihany no miala ary avy eo mety mila soloina izy rehefa lany ilay izy izay mora vidy kokoa noho ny fanoloana kodiarana iray manontolo, tokony jerenao ihany koa ny kodiarana, ny akanjo sy rovitra sasany dia antenaina mazava ho azy, fa jereo raha tonta tanteraka ny fanitsakitsahana ary koa mitady kapoka sy lavaka lehibe ao amin'ny kodiarana satria mety hidika izany fa mila soloina izy ireo dia hampiasaiko io mba hitsitsiana vola eny Mamaky indray ny vidin'ny lisitra amin'ny bisikileta. Toy izany koa no ampiasaina amin'ny kasety fitanana.
Rehefa tonta sy maloto io dia ampiasao fitaovana hanaovana fifampiraharahana vola kely hijerena ny powertrain. Ny drivetrain dia manondro ny rojo vy, rojo ary kasety amin'ny bisikileta. Ankehitriny ireo singa ireo dia ho reraka rehefa mandeha ny fotoana ary azonao antenaina fa hosoloina tsy tapaka izy ireo.
Fomba iray tsara hanamarinana ilay rojo raha hitanao fa tsara ny fampiasana testeran'ny rojo tsotra. Azonao atao ny mividy izany any amin'ny fivarotana bisikileta amin'ny kilao vitsivitsy ary fampiasam-bola mendrika izany. Ny mpanamarin-rojo dia milaza aminao raha efa nivelatra ilay rojo ary tena mora ampiasaina izy io, apetaho fotsiny izy dia milaza aminao izany.
Tsara ny rojon'i Opie. Raha efa lany ny drivetrain dia afaka mitsambikina kely izy ary mitsambikina ny rojo eo amin'ny cassette, izay mazàna no miharihary rehefa mamoaka torela kely ianao. Ohatra, rehefa mivoaka ny lasely ianao.
Na izany aza, tsy faran'izao tontolo izao araka ny nolazaiko fa azo soloina ireo faritra ireo, zavatra iray ihany izay tafiditra ao anatin'ny fandaniana rehetra. Marika iray hafa amin'ny fitafiana drivetrain ny nify mifangaroharo na tsy mitovy amin'ny kasety na ny rojo vy. Faritra iray hafa hijerena ny faritra ambany amin'ny bracket eto, izay misy ny basy crank eo amin'ny rafitra.
Zava-dehibe indrindra izany amin'ny bisikileta fibre karbaona ary tokony hitady triatra na simba ianao. Aza matahotra ny handray ilay bisikileta ary hijery eo ambaniny. Zahao ihany koa ny rojom-pitaterana fiara, matetika dia misy fahasimbana kosmetika fotsiny, fa mendrika jerena tsara.
Raha milatsaka na milatsaka ilay rojo, dia afaka mihetsika eto ilay sary ary indraindray dia mitehaka amin'ity tsato-kazo ity ny rojo rehefa mandeha amin'ny tany tsy mitovy. Ary averiko indray izany dia mety hiteraka chip sy gorodona eo amin'ny rindrina, matetika dia kosmetika fotsiny fa mendrika jerena ary jereo ihany koa fa tsy potika tanteraka ireo zana-kazo Afaka jerenao ny bearings raha misy lalao ao amin'izy ireo. Raha misy kilalao amin'ny bearings dia midika izany fa mila soloina matetika izy ireo.
Ny lohan-doha aloha, ka ny fomba fitsapanao an'ity dia apetaho ny frein aloha, apetaho eo ambonin'ny bisikileta toy ny ataoko izao, ary aolaho miverina izy. Ankehitriny, raha misy ny filalaovana dia ho tsapanao fa mihetsika manohitra ny fantsom-pifamoivoizana izy eto, manoloana ny sary, ary hitanao matetika izany. Soa ihany fa tsy misy lalao amin'ity iray ity.
Raha te hahitana raha misy lalao ao amin'ny fononteny ambany, izay ny mpiray amin'ny bisikileta, apetraho amin'ny tànana crank ny tananao ary andramo afindra amin'izany. Ary soa ihany raha misy lalao dia ho tsapanao indray, tsy misy lalao amin'ity iray ity. Ary farany, raha misy ny filalaovana ny bearings amin'ny kodiarana, ny fomba hanaovana izany dia ny misambotra ny kodiarana, na ny eo aloha na ny any aoriana, ary manandrana misintona azy fotsiny.
Ary raha misy fihetsehana miolaka be dia be mihetsika toy izany ny kodiarana, dia misy lalao any an-toby mety takiana izao raha toa ka mampandeha haingana ny maody Sherlock Holmes ianao, ary mijery olona mitaingina bisikileta raha toa ka milalao ny bearings , avy eo angamba tsy dia nandinika loatra izy ireo ary mety tsy fantany izay ataony. Fahalalana fototra. Tokony hojerenao foana fa marina ny kodia ary raha ny marina dia marina ny dikanay.
Rehefa nianjera na niasa tao anaty lavaka lehibe ny bisikileta dia mety hihozongozona ny kodiarana ary azonao atao ny manamarina izany amin'ny alàlan'ny fanodinana ny kodiarana fotsiny sy ny fijerena ireo marika mivezivezy mifandraika amin'ny pad frein ary jereo ilay fikororohana anaty kodiarana raha toa ka mihetsika toy izao. Raha misy tsy mety ny kodiarana dia tsy faran'izao tontolo izao fa zavatra mora hita ao amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana sahabo ho £ 10 na izay vola foana eo an-toerana no azo amboarina. Na dia zavatra tokony ho raisinao amin'ny lisitry ny vidiny aza, amin'ny fampiasana ny bisikileta sy ho toy ny fitaovam-barotra.
Toy izany koa ny frein-kapila, rehefa mihodina ny kodiarana ianao dia tsy tokony hikosoka amin'ny kaliperinao ilay kapila ary raha midika izany dia mety hidika izany fa somary miondrika sy mikoropaka ilay kapila, indray, zavatra tsy dia lafo loatra ho an'ny vola no azo amboarina , fa raiso an-tsaina izany. Raha somary miolikolika ilay kapila dia ho henonao (manao feo mikiraoka) isaky ny mandalo ilay pad izy. Ahoana no fomba Voalazanao ve raha sendra nisy lozam-pifamoivoizana tamin'ny bisikileta? Ary holazaiko aminao ny famantarana ny fahasimbana tsy nahy.
Ankehitriny dia mety ho miharihary raha sendra bisikileta nianjera raha an-tapitrisany, fa ny zavatra misoko mangina kokoa no horesahiko. Ka ny voalohany, ny mech aoriana, kilasika ity, raha manana rangotra lehibe eo amin'ny mech aoriana ianao, tsara. mariky ny fianjerana.
Eny, bisikileta dia kely mofo sy dibera, mirona amin'ny fidinan'ny orinasa izy ireo, hafahafa! Nefa mitandrema, ny iray hafa dia eo amin'ny lasely, eto amin'ny sisin'ny lasely, raha misy ny abrasion, izay mety ho marika tsara ihany koa fa nilatsaka ireo bisikileta. Ary koa amin'ny fantsom-bokotra eto sy amin'ny fantsom-pitaovana, raha rovitra amin'ny sisiny ilay kasety fantsom-baravarana ary misy ratra ny levera vita amin'ny kitapom-batsy, dia manondro fa nisy fiatraikany ilay bisikileta. Manaova sy mandrovitra ny levers gear, saddle, ary na dia ny mechares any aoriana aza dia matetika no cosmetic.
Ka raha manivana ny sisin'ny arabe ianao ary tsy misy fitsangantsanganana na fitsambikinana ary mandeha tsara ny zava-drehetra, dia mety tsy misy atahorana izany, ankoatry ny tsy fahita firy, manahy bebe kokoa momba ilay frame. Ka ny zavatra mahazatra dia ny fipoahana fantsona ambony, izay izao dia vokatry ny fianjerana, ka mihodina haingana ny tadin-tànana ary mamely ilay fantsona ambony. Ankehitriny ny tena azonao atao dia ny mihodina ny bara mba hahavitany ny top tu.
Avy eo jereo ity teboka manokana eo amin'ny fantsona ambony ity ary jereo raha misy fahasimbana eo. Raha izany dia mety hiteraka ahiahy izany. Ny zavatra iray hafa izay mahazatra kokoa amin'ny alim-by alimika na vy dia ny hoe mihodina na miondrika ny endriny.
Makà refy fandefasana kasety na raha tsy manana refy kasety ianao dia azonao atao ny mampiasa kofehy ary ny zavatra tianao hatao dia refesina avy eo amin'ny fivoahana any aoriana mankany amin'ilay fantsona ambony eo amin'ny toerana mitovy amin'ny lafiny roa amin'ny bisikileta, tokony ho lavitra ny roa Mitovy ihany, raha tsy izy ireo dia mety hanondro fa voahitsaka na miolakolaka ny endriny, ary raha tsara kokoa ny mandeha fotsiny dia andramo ny mitondra bisikileta mandritra ny dia fohy. eny an-dalambe fotsiny dia tokony ho ampy. Mialà amin'ny lasely ary manitsaka ny pedal, mihaino feom-peo mikotrokotroka, indrindra eo amin'ny fononteny ambany.
bisikileta amin'ny lohasaha
Mety hidika izany fa mila soloina ny fononteny ambany, zahao koa ny fiasan'ny frein, tokony hahatsapa ho tsara izy ireo ary ho afaka manidy ny kodiarana. Minono ihany koa amin'ny alàlan'ny kitapom-batsy ary zahao raha afaka miditra ao anaty pinion ianao ary tsy misy tsindry na fitsipahana. Amin'ny ankapobeny, raha toa ka toa marina loatra ny tolotra iray dia mety.
Ary rehefa manana olana be dia be ny bisikileta dia mety hisy ny korontana bebe kokoa noho ny vidiny. Ny tsenan'ny bisikileta efa niasa dia velona, ​​tsenan'ny mpividy izy io, ary be dia be ny fifanarahana mahafinaritra azo. Ka aza matahotra ny hijery be toa an'i Craig David .. ary mandehana.
Saingy amin'ny zavatra niainako mividy bisikileta efa niasa, raha misy izany ny bisikileta? Ny zavatra kely vitsivitsy, toy ny zavatra sasany noresahintsika tao amin'ilay lahatsoratra, dia mety ho ammo tsara hampihena ny vidiny. Ka manaova teti-dratsy. Marina, antenaiko fa nahasoa sy nahalala vaovao ity lahatsoratra ity.
Ary azafady zarao amin'ny namanao, indrindra raha te hividy bisikileta izy ireo ary tsy manana traikefa be. Azoko antoka fa ho hitanao fa mahasoa izany. Ary raha te hahita lahatsoratra misimisy kokoa ianao dia afaka manindry etsy ambany ary misoratra anarana amin'ny GCN koa, maimaim-poana izany! Tsara vintana amin'ny fikarohana anao, misy be dia be ny fifanarahana tsara any, ny tsara indrindra amin'ny fahitana bisikileta vaovao, handeha aho izao, veloma!
Inona no marika bisikileta malaza indrindra?
1) Goavana. Ary ny mpandresy tsy azo iadian-kevitra dia ny Giant Bisikileta. Tsy azo odiana itymarika mahazatra indrindraary koa nyindrindranitaky ny rehetrabisikiletaeny an-tsena. Mpanamboatra monina any Taiwan, Giant Manufacturing Co dia manana orinasa mpamokatra entana any Netherlands sy China koa.27 2020.
Tsara kokoa ve ny bisikileta taloha noho ny vaovao?
Raha normal ianao, isan'andro ny mpandeha dia voakarakara tsarabisikiletananomboka tamin'ny taona 80 dia mety ho tsara tanteraka, saingy maoderina kokoabisikiletamety ho somary maivana kokoa, somary afaka mandona volo ihanytsara kokoarafitra fanodinana ary izany dia mety hahatonga ny fahasamihafana raha mampiasa azy isan'andro.
Misy vidiny ve ny bisikileta Schwinn taloha?
Miovaova be ny vidiny, arakaraka ny toe-piainana, taona, tsy fahampiana ary faniry ny maodely. Ohatra, fiotazam-boalobokaSchwinnNy tsio-drivotra mila famerenana amin'ny laoniny dia amidy hatramin'ny $ 70. Etsy ankilany, tamin'ny 1920SchwinnExcelsior miaraka amin'ny loko tany am-boalohany dia afaka mivarotra hatramin'ny $ 900.
Mendrika ve izany ny bisikileta taloha?
Ratsy ve ny bisikileta taloha?
Bisikileta talohatsyratsyary tsy miadana foana izy ireo, saingy mora kokoa ny mampiasa ambaratonga ambany ambany vaovaobisikileta. Misy olana sasany amin'ny frame sy fampifanarahana izay tsy ho hitanao eo no ho eo hoe iza no handany azybisikiletasinga rehefa mandeha ny fotoana. Tsy midika koa izany fa tsy afaka manamboatra anbisikileta taloha.
Mitondra vola ve ny bisikileta taloha?
Aza mihevitra ny fiotazam-boalobokabisikiletadiamanan-danjaharena iray, satria ny tsara indrindra ihanybisikiletamahazoa vidiny lafo, hoy i Langley. Vintage indrindrabisikiletaamidio eo anelanelan'ny $ 100 sy 400 $. Na dia ny fahagola manara-penitra amin'ny tranom-bakoka, toa ny highwheelbisikileta, mazàna tsy manova tanana mihoatra ny $ 3,000 ka hatramin'ny $ 4000.
Karazana bisikileta inona ilay bisikileta Peugeot vaovao?
Ireo bisikileta vaovao dia ahitana bisikileta hybrid, urban, road ary an-tendrombohitra ary hitondra ny sary mainty sy fotsy izay nampiasaina tamin'ny bisikileta ekipa Peugeot nandritra ny fahombiazan'izy ireo izay nanomboka tamin'ny Tour de France tamin'ny 1904 sy ireo hazakazaka ambony manaraka.
Karazan-seza inona no ananan'ny bikeradar Peugeot?
Ny orinasa dia tazomina mafy momba ny aliminiam-baravarankely sy ny boribory, ny fantson-tavy dia afaka amin'ny famolavolana kanto afa-tsy ireo fipetrahan'ny seza mihorona. Ny tendrony aloha dia fametahana refesina mahitsy fa tsy tapered, miaraka amin'ny tongotry ny karbaona fotsiny eo amin'ny kitro. Na ny fork na ny boaty dia maivana, ary ny volon-doko tamin'ny santionanay dia vita ihany koa.
Ohatrinona ny chequerboard amin'ny Peugeot 1980?
Na dia tsy replika ekipa Retro mivantana aza izany, ny chequerboard amin'ny antsipiriany dia mampihetsi-po ny colourway mahazatra 1980. Ny lasely vita amin'ny hoditra Brooks sy kasety bara, feno bara famaranana bosoa, manamafy ny fiangaviana mahazatra. Ny Pro matevina hoditra dia mavesatra be amin'ny 530g - in-droa ny lanjan'ny ankamaroan'ny lasely - fa tsy ampian'ny zana-tsofina 370g.